Ho an'ny fizaran-taona maromaro eo amin'ny andian-jiro lamaody lamaody dia tena mahafinaritra be, satria ireo zavatra ireo dia mipetrapetraka tsara amin'ny vehivavy rehetra, ary mifanandrify tsara amin'ny akanjo maro isan-karazany. Ny akanjom-bolo hoditra lamaody 2013 dia somary tsy mitovy amin'ireo modely tamin'ny vanim-potoana teo aloha - samy hafa amin'ny loko, sy ny karazany ary ny fitaovan'ny fitaovana izy ireo.
Fananganana jirobe amin'ny lamaody amin'ny lamaody 2013
Amin'ny vanim-potoana manaraka, ny lamaody ho an'ny jirobe hoditra 2013 dia mamaritra ny fitsipika mifehy ny loko. Ireo mpandrindra mondialista dia tsy mahagaga ny fomban-drazana miaraka amin'ireo alokaloka mahaliana indrindra. Anisan'ny lamaody lamaody amin'ny jiromitra hoditra amin'ny taona 2013 dia ilaina ny manasongadina beige, beige, caramel, sand, kafe amin'ny ronono, ary ronono maizina. Tsy hivoaka ny lamaody tsy misy fombafomba tsy misy lanjany, noho izany, amin'ny haavon'ny laza dia modely mainty ihany koa.
Raha ny mahazatra ny akora tsy mahazatra - jiro hoditra 2013 ho an'ny ankizivavy dia azo zakaina miaraka amin'ny tsangambato tany am-piandohana vita amin'ny hoditra vita amin'ny varahina varahina, volamena na volafotsy.
Afaka manao akanjom-behivavy maingoka ianao miaraka amin'ny saika hafa, tsy maintsy mampiseho ny eritreritrao ianao ary mamorona sary vazaha momba ny vehivavy. Mahafinaritra tokoa, ny vokatra vita amin'ny hoditra dia mijery ny akanjo hariva, ny lokony sy ny leggings , ny akanjony ary ny jeans, ny asa ara-barotra, izay misy ny ampongabendanitra feno tampoka. Ny akanjo fanatanjahan-tena ara-panatanjahantena no mijery tsara kokoa amin'ny akanjo amin'ny akanjo na fanatanjahan-tena isan-karazany, izany hoe, miaraka amin'ny vokatra izay tsy misy endri-javatra amin'ny hariva hariva.
Ho an'ny kiraro, amin'ny fampifanarahana amin'ny akanjo jiro maingoka dia tsara kokoa ny manolotra kiraro, kiraro kiraro , kiraro na kapa.
Fashion Stylish Women's Leather Jackets 2013
Amin'ny fotoam-pivoriana ho avy, ireo mpanakanto dia nanome ny safidiny kokoa ho an'ny vehivavy, izay tsy hanafina ny fahamendrehan'ny vehivavy vavy amin'ny fomba fijery ivelany. Noho izany, azo atao ny manadino ny akanjo japoney, tsara kokoa ny mifidy modely kokoa.
Ny Fashion 2013 ho an'ny jirometin'ny hoditra vita amin'ny hoditra dia miavaka amin'ny tsikombakomba mahaliana amin'ny fitaovana samihafa. Ao amin'ny fanangonana vaovao dia afaka mahita fitambarana fitaovana sy lamba toy ny felaka, kiraro, akanjo ary mazava ho azy, hoditra.
Ny halavan'ny lamaody lamaody indrindra dia mety ho hafa tanteraka. Ny safidy amin'ny halavan'ny fananana dia miankina amin'ny filanao sy ny zavatra ilainao. Ny vokatra ho an'ny toeram-piantsonana sy ny fivoriana fandraharaham-barotra dia ny lohalika, ny modely amin'ny akanjo isan'andro sy ny làlana an-dalambe dia fohy kokoa.
Fanteno ny modely tsara, tandremo ireo kilasy tsy miankina, satria amin'ny vanim-potoana ho avy dia ny fialan-tsasatra malaza sy ny fomba amam-panao hentitra izay hanjary malaza sy lamaody. Mba hanaparitahana sy hikolokolo kely ny sary amin'ny jakanjely mahazatra, afaka mifidy modely miaraka amin'ny akanjo amam-paty sy marevaka ianao. Mety misy rivotra, bokotra, bokotra, zipera na bokotra - izany rehetra izany dia hampivelatra ny endriky ny jaky miloko mainty.
Safidy tsara dia ny modely tonga teto amintsika hatramin'ny taonjato faha-70. Ny vokatra toy izany dia manana toetra mampiavaka azy ireo: tsipika mahitsy, ny lavany midina amin'ny lohalika, ny tavy izay manantona ny tavy, sy ny paosin-tsakafo faran'izay tsara. Ao amin'ny taharo maro avy amin'ny marika eran-tany dia azonao atao ny mahita ny angon-drakitra amin'ny modely tamin'ny taompolo 70, izay vita tamin'ny fitaovana vita amin'ny hoditra.
Raha te ho eo an-toerana foana ianao, dia ny fomba tsara indrindra hipoitra dia sary nalaina tamin'ny akanjo hoditra vita amin'ny biker, izay novonoina tamin'ny loko tsotra. Azo ampidinina amin'ny fitaovana mahaliana - tsilo na tselatra.
Fananganana haolo andro 2016
Garderônin'ny fahavaratra 2014
Ankizivavy lava lava 2014
Anklements of Women's Summer 2013
Italiana Fashion Dresses 2014
Toto amin'ny totozy
Mialà sasatra amin'ny Balkhash
Fitsipika 40 tsy mahazo aina, izay takiana hanaraka ny fianakavian'ny mpanjaka britanika
Fritters avy amin'ny aviavy
Anarana amin'ny teny koreana
Selene Gomez dia nanova ny voa
Lehilahy Capricorn amin'ny resaka firaisana ara-nofo
Soso-tsakafo - kalozia votoaty
Mofomamy miaraka amin'ny hoditra
Sakafo ho an'ny volo